Ukuziva usekhaya yinjongo yethu ephambili
Awukwazi ukuthi ungowalapha xa ungamkelwa naxa ukhethwa. Ukwenza ihlabathi apho abantu banokuthi bahlale khona naphi na, kufuneka sithabathe amanyathelo ukwenza indawo yomsebenzi apho wonke umntu eziva esekhaya nalapho kuviwa onke amazwi.
I-Gender Global ku-Airbnb
Isini sase-US ku-Airbnb
Uhlanga lwe-US kunye nobuhlanga kwi-Airbnb
Khuphela Inkcazelo Yengxelo Yomqeshi (ka-2017)
Khuphela Inkcazelo Yengxelo Yomqeshi (ka-2018)
Ubunkokheli buchazwa njengenqanaba 11 okanye ngaphezulu, ubuncinane bunengxelo enye, engeyiyo eyexeshana, okanye eyangaphakathi.** Ubugcisa buchazwe njengoBunjineli, iMveliso, iNto Eyilwayo, iNzululwazi yeDatha (i-Analytics) kunye namaqela eNkcazelo eTeknoloji. Ayibandakanyi Abancedisi Babaphathi Nabaququzeleli Bamaqela.** Ubunjineli bubandakanya wonke umntu ngaphakathi kwicandelo lethu lobuNjineli Ayibandakanyi Abancedisi Babaphathi Nabaququzeleli Bamaqela.**
I-Able @ liqela labasebenzi abaneziphene ezahlukeneyo, ezibonakalayo nezingabonakaliyo nabanye abantu abasebenza nathi. I-Able @ yenzelwe ukuphakamisa nokuxhobisa amalungu ngoxa inenjongo yokufundisa abantu baphucule iindawo zabo zokulala ukuze zilungele iimfuno zethu ezikhethekileyo.
I-AirPride @ idibana rhoqo ngenjongo yokugcina i-Airbnb iyindawo emangalisayo yabantu be-LGBTQ ukusebenza. Siceba indlela zokuzonwabisa, imizamo yokuzivolontiya ye-LGBTQ, kwaye sisebenzela ukufundisa i-ofisi enkulu ngeziganeko ezifana nokuziphakamisa kunye neepaneli zemfundo zangaphakathi.
I-Asians @ kukudibana kwabantu base-Asia nabesiqithi se-Pacific (API) Abantu kunye Namaqela Enkcubeko axhasanayo. Sizama ukuqinisekisa ukuba onke amalungu aziva esekhaya kwi-Airbnb, kokubini ngaphakathi kwenkampani kunye nakwintsapho yethu yehlabathi Yababuki Zindwendwe Neendwendwe.
IBlack @ izama ukuqinisekisa ukuba onke amalungu e-Airbnb aziva esekhaya. Sinikezela ngendawo ekhuselekileyo yeentlanganiso zabasebenzi abamnyama ukuze bathethe ngocalulo kunye nobuhlanga ekuqeshweni, ekugcineni nangemigudu yabantu kwi-Airbnb.
I-Foreignairs@ ibhiyozela iimvelaphi ezahlukeneyo zabasebenzi be-Airbnb. Siyabamkela abantu abasuka kumanye amazwe kwintsapho yethu yabaebénzi ukuze babelana nathi ngamava, izinto neembono zokuziva benekhaya naphi na.
I-Juntos podemos! I-Juntos @ ibhiyozela ukufana kunye nokungafani kwenkcubeko yethu. Sizama ukufundisa, ukuphakamisa, nokuxhasa abantu bethu baseLatatinx ngokusebenzisa amavolontiya, iiholide, iintetho kunye namathuba okufikelela.
I-Natives@ yenzelwa ukuba bonke abantu bomthonyama, amaMerika omthonyama, ama-Inuit nama-Aboriginal ukuba babe nelizwi kubantu be-Airbnb. Sigcina iinkcubeko zethu ziphila ngokukhuthaza ulwazi kunye nokubhiyozela ukukhuthaza ukuzidla ngabo bonke aba nelifa lemveli elifanayo.
I-Nerdettes @ yeyamabhinqa akwezobunjineli, kwi-data science nakwi-ITX! Siba neentlanganiso rhoqo ukuze sabelane ngamava nokuze sixhasane ekulweni imiqobo ukuze siphumelele. Yiba kunye nathi kwisidlo esibakho nyanga nganye uze uzazise kwabanye abantu!
I-Parents@ liqela elixhasa abasebenzi abanabantwana, abazinikezeleyo ekwakheni inkcubeko ephilileyo kubazali kunye neentsapho zabo. Siyabelana ngezinto zokugcinwa kwabantwana, ezomfundo, ezobuzali, ezokuhamba kunye neabantwana nezokubuyela emsebenzini emva komntwana kunye nezinye.
I-Tribe @ yaqala njengeqela lomntu onomdla kubomi bamaYuda kunye nenkcubeko kwi-Airbnb, kwaye iye yanda yaba yindawo yabantu yokwabelana ngonqulo, ngenkcubeko nobuhlanga yabasebenzi be-Airbnb. Siyadibana ukuze sabelane ngezinto ezisonwabisayo nokubhiyozela izinto esizifezileyo!
I-Veterans @ zibhiyozela igalelo nezinto ezincanywe nguMkhosi Oxhobileyo wamagqala. Siyawaxhasa amagqala omkhosi ehlabathini lonke, kuquka ukuqeshwa kwamagqala nokuxhasa iintsapho zabantu namagqala onzakele emkhosini.
I-The Women @ Airfinity liqela eliyindawo ekhuselekileyo yabo bonke amabhinqa e-Airbnb nabo babaxhasayo. Sizinikezele ekugcineni iincoko zentsapho zivulekile ngeengxaki ezijongene namabhinqa kwi-tech, amathuba okucebisa kunye nenkxaso yobunkokheli kwi-Airbnb.
I-White House Equal Pay Pledge
Senze isibhambathiso sokufumana nokukhuthaza ukwenziwa kwezinto ezintle ukuvala umsantsa kumvuzo welizwe, siqala kwiiofisi zethu.
I-White House Tech Inclusion Pledge
Sithabatha inyathelo lokwenza ukuba abasebenzi bethu bamele ngokupheleleyo abantu baseMelika, ngokusetyenziswa kwamanyathelo angoko kunye nawexesha elide.
Sikholelwa kumandla eembono ezahlukeneyo kunye neembono zomsebenzi, kwaye sabelana ngeendlela ezenza amaqela ethu ahlole imisebenzi yethu.
I-HRC Corporate Equality Index
Siyazidla ngokuxhasa umsebenzi wePhulo Lamalungelo Abantu, nokukhethwa 'Njengeyona Ndawo Yomsebenzi Ingabacaluliyo Abantu be- LGBT ,' nokufumana i-100 pesenti kwi-2016 Corporate Equality Index yabo.
Intsapho yethu ngeyona nto yethu. Sithetha phandle ngeenkqubo zethu zokuqeshwa kunye nodliwano-ndlebe kuba ukwabelana ngenkcazelo kubalulekile ukuqhubela phambili.
Inkqubo Ye-Airbnb Yokudibanisa
Ukwahluka kuyawomeleza amaqela ethu nezinto zemveliso azenzayo. I-Airbnb idibanisa abantu abasebenza kunye, kunye nemibutho engenzi nzuzo ukurhwebesha amaqela angamelwanga ngeteknoloji.